Mucjisada Qoys Samada Dhagaxaan Dhiig Lihi Kaga Soo Daadanayaan, Cuntada Marka Ay Karsadaana Ciid Lagaga Daadinayo Alaabta Gurigana Bannaanka Loogu Qubayo - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Mucjisada Qoys Samada Dhagaxaan Dhiig Lihi Kaga Soo Daadanayaan, Cuntada Marka Ay...
Mucjisada Qoys Samada Dhagaxaan Dhiig Lihi Kaga Soo Daadanayaan, Cuntada Marka Ay Karsadaana Ciid Lagaga Daadinayo Alaabta Gurigana Bannaanka Loogu Qubayo
“Dhagxaantan Qaarkood Midabkoodu Waa Cagaar, Kuwo Dhiig Leh, Iyo Kuwo Saliid Madaw Leh, Alaabta Oo Aad Arkayso Ayaa Dibadda U Yaacaysa”… Hooyada Qoyska
Kadib falkii dhawaan lagu arkay Gobolka Sanaag ee qoyska samada lagaga soo daadinayay dhagxaanta waxa kale oo Dhacdo Mucjiso iyo la yaab leh noqotay in lagu arkay tuulo u dhow magaalada Qardho ee Maamulka Puntland Soomaaliya ka dib markii qoys Soomaaliyeed oo ku nool Tuuladaas ay la kulmeen weerar aan kala joogsi lahayn oo dhagxaan lagu Tuurayo habeen iyo maalin kuwaasi oo xagga samada kaga soo daadanaya iyadoo aan la arkaynin cid soo tuurayso oo qoyskaasi reer miyiga ah beegsanaysa, iyada oo aanay cidina u dhawayn buulka yar ee ay degan yihiin ama cid looga shakiyi karaa ka ag dhawayn, iyada oo sidoo kale arrinka layaabka lihi yahay xajmiga dhagxaanta oo qaarkood aad u waaweyn yahay laguna beegsanayo saddex ubad ah oo qoyskaasi dhaleen.
Qoyskan Soomaalida ah ayaa waxaa ay sheegeen in dhagax joogto ah oo aan la arkayn cidda soo tuureyso lagu soo weeraro iyadoo inta badan la beegsanaayo caruurta qoyska iyo dadka waaweyna. Hooyada Qoyskaan oo lagu magacaabo Farxiya Cabdiqani ayaa waxay sheegtay inay in mudo ah uu ku socday weerarkaas isla markaana markii hore la soo weerari jirey xillayada Maqribka ah laakiinse ay hadda noqotey mid mar walba lagu soo qaado weerarkaas. iyadoona intaas raacisay in dhagaxyo midabyo kala duwan leh lagu soo weeraro islamarkaana ay dhagxaantaasi qaarkood ay leeyihiin dhiig.
Ugu dambeyntiina iyadoo qoyskaas ay la kulmeen arintaas Mucjisada iyo Yaabka leh ayaa hooyadaas waxay sheegtay in sidoo kale alaabta guriga taalla dibada loo soo tuuro iyadoo intaas raacisay inaanay arkayn waxa tuuraya laakiin ay arkayaan sheygii oo cararaya, Hooyadan ayaa waxaa kale oo ay sheegtay in raashinka marka ay cunaayaan iyagoo arkaya lagu shubo dhagxaan iyo Carro, Caruurta Qoyskan oo loola cararay magaalada Qardho ayaa qoyskii loo geeyey waxay Sheegeen in halkaas looga daba yimid islamarkaana sidoo kale ay mucjisadaas ay daba socoto, Arrintaan Mucjisada ah oo aan la ogeyn waxa ay tahay ayaa Sidoo kale waxaa hore loogu arkay meelo ka mid ah gobolka Sanaag ee Bariga Somaliland.
Hooyo Farxiya Cabdiqani oo u warramaysay telefishanka Jubbaland ayaa waxa ay tidhi: “Dhegxaantaasi waxa ay nagu socdaan muddo laba bilood ah. Mudadii hore maqribka ayaa nala shiidi jiray imika maalin iyo habeenba waa nagu socdaan. Aniga iyo gabadh yar oo aan dhalay nabarro ayaa naga soo gaadhay dhagaxaantaasi. Marka wadaadadu qur’aanka nagu akhriyaan waa la dhagxiyaa oo waa la weeraraa. Dhagaxu inta uu doono ayuu le’eg yahay. Kuwo waa dhadhaaro waaweyn qaarna waa dhexdhexaad. Qaarbaa waxa ay leeyihiin calaamado buluug ah, qaarbaa waxa ay leeyihiin midab cagaar ah qaarbaa waxa ay leeyihiin wax aad saliid ama ooliyo mooddo. Qaarbaa dhiig qoyan leh, qaarbaa dhiig qalalan leh. Guriga alaabtiisa waa la tuurtuurayaa. Raashinka waa la jeexjeexayaa. Shayga oo cararaya ayaad arkaysaa. Gurigaasi alaabtiisa oo dhan dibadda ayaa loo farraqayaa oo loo daadinayaa adiga oo arkaya. Cuntada marka sidaa bariiska tusaale ahaan looga soo rido waxa nalagaga daraa ciid. Marka cunto ubadkaasi loo soo dhigo waxa lagu darayaa carro intii cuntada le’eg oo kale oo quruurux iyo ciid ah” ayay tidhi hooyo farxiya.
Falkan ayaa ah kii labaad ee lagu arko geyiga Soomaalida iyada ooh ore qoys kale loo arkay falkan oo kale kaasi oo ku nool Gobolka Sanaag ee Somaliland.
KSA: Envoys discuss real estate issues in Muslim countries